Imodeli : Ingxenye yomkhiqizo we-PR-850: I-Vanity + Countertop + Mirror Ubukhulu: Ububi: 800*580*850、Isibuko: 700*40*830 Umbala: Okumhlophe noma okwenziwe ngezifiso: Izinkuni zenjoloba eqinile, ipulangwe, Imabula yemvelo, Izingxenyekazi zekhompyutha ze-DTC. 1. 2iminyango ethambile 2. 1idilowa elithambile 3. Izilinganiso zokuphakama eziguquguqukayo 4. Imabula yemvelo. 5. upende onobungane 6. ize eyakhiwe ngezandla 7. Uhlaka lwesibuko sokhuni…
Imodeli : Ingxenye yomkhiqizo we-PR-748: I-Vanity + Countertop + Mirror Ubukhulu: Ububi: 1000*600*850 Isibuko: 580*30*800 Ikhabethe eliseceleni:300*165*800 Umbala: Okumhlophe noma okwenziwe ngezifiso: Izinkuni zenjoloba eqinile, ipulangwe, Imabula yemvelo, Izingxenyekazi zekhompyutha ze-DTC. 1. 2iminyango ethambile 2. 2idilowa elithambile 3. Izilinganiso zokuphakama eziguquguqukayo 4. Imabula yemvelo. 5. Upende olungele i-Eco 6. Ize eyenziwe ngezandla 7. Uzimele wezinkuni…
Imodeli : Ingxenye yomkhiqizo we-F-7443: I-Vanity + Countertop + Mirror Ubukhulu: Ububi: 1000*500*840、Isibuko: 900*165*810 Umbala: Mhlophe, gery noma Izinto ezenziwe ngezifiso: Izinkuni zenjoloba eqinile, ipulangwe, Imabula yemvelo, Izingxenyekazi zekhompyutha ze-DTC. 1. 2iminyango ethambile 2. 2amadilowa athambile 3. Izilinganiso zokuphakama eziguquguqukayo 4. Imabula yemvelo. 5. upende onobungane 6. ize eyakhiwe ngezandla 7. IKhabhinethi yesibuko nokuyize…
Imodeli : Ingxenye yomkhiqizo we-F-7143: I-Vanity + Countertop + Mirror Ubukhulu: Ububi: 1250*590*850、Isibuko: 1100*155*900 Umbala: Okumhlophe noma okwenziwe ngezifiso: Izinkuni zenjoloba eqinile, ipulangwe, Imabula yemvelo, Izingxenyekazi zekhompyutha ze-DTC. 1. 2iminyango ethambile 2. Izilinganiso zokuphakama eziguquguqukayo 3. Imabula yemvelo. 4. upende onobungane 5. Imininingwane ebaziwe yesandla iyize 6. Uhlaka lwesibuko sokhuni nobuze beQ1: Yini indaba…
Imodeli PR-949 Usayizi weKhabhinethi 2020 * 580 * 850mm Usayizi Wezibuko 1700x60x900 mm Izinto Zenjoloba Izinkuni Uqwembe Umabula Wemvelo 1280 ℃ kanyekanye ekubumbeni umcengezi we-ceramic. Ubukhulu be-Glaze>1.1ifreyimu yezinkuni zerabha ye-mm Mirror ,5mm ithusi isibuko sesiliva samahhala Umbala C25 Umdwebo wokuvula omhlophe Hardware DTC igebe lokuvala elithambile & ngaphansi kwesilayidi sedilowa esifakiwe 1. Upende we-VALSPAR, ezemvelo…
Imodeli PR-861 IKhabhinethi Usayizi 737x580x850mm Mirror 680x125x880mm Material Rubber oak Countertop Natural marble Basin 1280 ℃ one time molding besin ceramic. Ubukhulu be-Glaze>1.1mm Mirror Uhlaka lwokhuni lwenjoloba ,5mm ithusi isibuko sesiliva samahhala Umbala we-C25 Beige openda upende I-Hardware DTC ethambile yokuvala ihinji & isilayidi sedrowa eyehlisiwe 1. Upende we-VALSPAR, ukuvikelwa kwemvelo.
123Okulandelayo>...30 Ikhasi 1 ye 30